Manjaro haisisiri yekuparadzira chete Linux uye inova kambani | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro haisisiri yekuparadzira chete kweLinux uye inova kambani yese
Sezvo vazhinji venyu munoziva, Ubuntu is an operating system, currently available in 8 official flavour, maendeleo uye kuchengetedzwa neCanonical (uye mamwe zvikwata zvinoshanda pasi pemaambura avo). Mazhinji maLinux anogoverwa anovandudzwa nezvikwata zvidiki zvinoshanda munguva yavo yekusara, asi mamwe acho anopedzisira achikura zvakanyanya zvekuti vanouya kuzoshuvira chimwe chinhu. Izvi ndizvo zvakaitika Manjaro, chirongwa chakazove kambani ine zvirongwa zvekuda zvemberi.
Yakanga iri zuro Svondo apo Philip Müller akabuda nhau: Kambani iyi yakapihwa zita rekuti Manjaro GmnH & Co KG, zita risinganyanyoyevedza kupfuura Canonical kana Red Hat, asi iro richabvumidza chirongwa chehurongwa hwekushandisa pamwe nenharaunda inochishandisa kubatsirwa. Müller anoti anga achiferefeta nzira dzekuchengetedza chirongwa ichi muchimiro chazvino uye nekubvumidza zviitiko zvisingakwanise kuitwa muchirongwa chakatorwa sekuvaraidza. Mhinduro kune zvese izvi yaiita kunge ichiitika nekugadzira kambani yese, saka vakafunga kutora pombi.
Manjaro GmbH & Co KG harisi iro zita rakanakisa, asi kuve naro kunobatsira
Kuvapo kweManjaro GmnH & Co KG, ndiko kuti, kambani inovatsigira, ichavatendera kushanda nguva yakazara, zvirinani kuchengetedza izvo zvavanotova nazvo, uye ongorora mikana yemberi yebhizinesi. Ivo zvakare vanozorayirwa neBlue Systems, kambani yeGerman yakasarudzika yemahara uye yakavhurwa sosi software. Mipiro inogamuchirwa ichaenda kuCommunityBridge uye OpenCollective, iyo inochengetedza zvipo uye kuita kuti mashandisiro avo ave pachena
Zvinangwa zvechimbichimbi ndezvi:
Bata nevamwe vanogadzira paLinux sprints uye zviitiko.
Dzivirira rusununguko rwaManjaro seyakananga-inotungamirwa chirongwa, pamwe nekudzivirira mhando yayo.
Ipa zvinokurumidza zvekuchengetedza zvigadziriso uye nekuwedzera kuita kune izvo zvinoshandiswa nevashandisi.
Ipa nzira dzekuita sekambani padanho rehunyanzvi.
Muchidimbu, nguva zhinji tinotaura nezvekuvandudzwa kwekuchengetedza kwainoburitsa Canonical Isu tinoti ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakanaka nezvekushandisa sisitimu inoshanda inotsigirwa nekambani huru: rutsigiro. Ichi ndicho chinhu icho Manjaro ichavandudza pamwe nekugadzirwa kwekambani iine (rinenge) zita rimwe chete. Saka aya ndiwo mashoko akanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro haisisiri yekuparadzira chete kweLinux uye inova kambani yese
Chrome 77 ikozvino yavapo, inosvika iine nyowani nyowani mumafavicon
Shanduro nyowani yeOSGeoLive inowanikwa kurodha pasi